Soosaarayaasha sprocket-ka warshadaha - Shirkadayaasha Shiinaha & sprocket sprocket
Waxaan nahay warshad bajaajleyda; Waxay soo bandhigi kartaa qaybo mootooyin kale ah, warshaduhu sidoo kale way fuulaan1) Waqtiga dhalmada degdega ah 2) kala goynta wanaagsan ee ilaaliyaha ka dib 3) Tayo sare iyo qiime tartan 4) Shaybaarro bilaash ah ayaa la bixin karaa haddii loo baahdo. 5) Ka fikir dhinaca macaamiisheena si aad uga caawiso inay lacag kaydsadaan 6) Waxyaabaha: 1023 (A3) bir, 1045 (45 #) bir, 16Mn 7) Daaweynta kuleylka: Hing-ga qufulka-soo noqnoqda, carburization 8) Daaweynta dusha sare: Sandblasting, galvanized , Cr-dahaarka, rinjiyeynta, galvanized iwm Speciali ...
Waxaan ku siin karnaa qalabka sida ku cad sawirka macaamiisha. Oo ay ku jiraan qalabka wax lagu dhejiyo, qalabka korontada ku shaqeeya, qalabka wax lagu duubo, geedaha lafdhabarta ah, qalabka laba-jibbaar ah, giraanta qalabka, qalabka gawaarida iwm. illaa 3000 mm Ilkaha dhulka: AGMA 13 Heerka: AGMA, ISO, DIN, JIS Waxyaabaha: Qalabaynta Qalabka loo habeeyo saxnaanta miiska xiriirka calaamadaha astaamaha calaamadaha Saxnaanta buundooyinka Shakhsi ahaaneed F r ISO; GB / T 3 4 5 6 7 ...
Gear Mashiinka Maaskaro la Tuuri karo
Guudmarka Faahfaahinta Faahfaahinta Waxyaabaha: 45 #, Q235,20CrMo, ahama iyo bir looga baahan yahay macaamiisha. Heer Caan ah: ISO Meesha Asalka ah: Hebei, Magaca Magaca Shiinaha: SHUANGKUN Nambarka Qaabka: Codsi loo habeeyay: Qalabka warshadeynta Daaweynta dusha sare: Nadiifinta iyo habeynta Qalabka: Hobbing Daaweynta kuleylka: Ilkaha adag ee Wadada: Gawaarida Gawaarida: Nooca Gaarka ah ee Chain Wheel Color: Nature Isticmaal: Magaca Badeecadda Indurstry: Drive Sprocket Gear Suppl ...
Gear loogu talagalay Mashiinka Maaskaro Maaskaro
Qalabka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Qalabka Gudbinta Qalabka
Sprocket-ka caadiga ah ee silsiladda duuban
Gawaarida Gawaarida Farsamada Qalabka
Shiinaha Waxay Sameysay Xirfadlayaal Qaabdhismeed Kala Duwan oo Kala Duwan
Qeexitaannada 1. TS 16949 soo saaraha hantidhawrka ah 2. Tayada OE 3. Waxaan awoodnaa inaan soo saarno dhammaan noocyada geerka sida ku xusan shuruudahaaga Qeexitaannada: 1) Ku habboon gudbinta gawaarida nalka kala duwan 2) Wuxuu korsadaa naqshadeynta ugu habboon iyo daaweynta toogashada si loo yareeyo buuqa iyo kordhinta awoodda xamuulka 3) Habka caadiga ah wuxuu udhaxeeyaa 1.5 ~ 3 4) Hawlgalinta: saxsanaanta foojignaanta kulul iyo qabow, saxitaanka mashiinka iyo duubista oo sameysmaya 5) Daaweynta kuleylka: Daaweynta, hagaajinta, kaarbinta, Kaarbinta, xanaaqa 6) P ...